Iindaba - Abenzi bezincedisi zokutya babonwa ngokukodwa phantsi kwesikhokelo esitsha somdibaniso
I-Coronavirus inyuse ngokunyanzelekileyo ibango labathengi base-US kwizinto ezininzi zokutya, nokuba kukuphuculwa kwesondlo ngexesha lobunzima, ukunceda ngokulala kunye noxinzelelo loxinzelelo, okanye ukuxhasa amandla omzimba omeleleyo ukuphucula ukuxhathisa ngokubanzi kwizisongelo zempilo.
Uninzi lwabavelisi bezongezo zokutya bakhululekile ngoMgqibelo emva kweCybersecurity kunye ne-Arhente yoKhuseleko lweZiseko (i-CISA) kwiSebe lezoKhuseleko lwasekhaya bakhuphe isikhokelo esitsha malunga nabasebenzi beziseko zophuhliso ababalulekileyo abanxulumene ne-COVID-19, okanye uqhambuko lwe-coronavirus.
Inguqulelo 2.0 ikhutshwe kwimpelaveki kwaye ichongiwe ngokukodwa abavelisi bokutya-kunye nolunye ushishino-olunabasebenzi kunye nokusebenza kunokuthathwa njengokuxolelwa ekuhlaleni-ekhaya okanye kwi-odolo yendawo yokuhlala etshabalalisa amazwe amaninzi.
Isikhokelo sangaphambili seCISA sikhusele ngokubanzi uninzi lwala mashishini phantsi kokutya okungacacanga okanye iindidi ezinxulumene nezempilo, ke into eyongezwayo eyamkelweyo yamkelekile kwiinkampani kumashishini abizwa.
"Uninzi lweenkampani zethu ezingamalungu zifuna ukuhlala zivulekile, kwaye zihlala zivulekile phantsi kwengcinga yokuba ziyinxalenye yecandelo lokutya okanye icandelo lokhathalelo lwempilo," utshilo uSteve Mister, umongameli kunye ne-CEO yeBhunga leZondlo eziXanduva (CRN ), kudliwanondlebe. “Le nto iyenzayo iyenza icace. Ke ukuba umntu ovela kunyanzeliso lomthetho kufanele abonakale kwaye abuze, 'Kutheni uvulekile?' bangakhomba ngqo kwisikhokelo seCISA. ”
Umphathiswa wongeze wathi, “Ukuphuma komjikelo wokuqala wale memo, sasiqinisekile ukuba sizakubandakanywa ngokuthobela ... kodwa ayithethi gca ngezongezo zokutya. Kukhe kwafuneka ufunde phakathi kwemigca ukuze usifunde kuyo. ”
Isikhokelo esihlaziyiweyo songeza iinkcukacha ezibalulekileyo kuluhlu lwabasebenzi beziseko zophuhliso ezibalulekileyo, esongeza ukubaluleka kukhathalelo lwempilo olukhulu, ukunyanzeliswa komthetho, ezothutho kunye namashishini okutya nawolimo.
Abenzi bezincedisi zokutya zikhankanyiwe ngokukodwa kwimeko yokhathalelo lwempilo okanye iinkampani zempilo yoluntu, kwaye zidweliswe namanye amashishini afana ne-biotechnology, abasasazi bezixhobo zonyango, izixhobo zokhuselo, amayeza, izitofu, kunye nemveliso yetawuli yephepha.
Amanye amashishini asandula ukubizwa ukuba akhuselwe avela kubathengisi kunye nabasebenzi basekhemesti, abavelisi bokutya kunye nabanikezeli, ukuvavanywa kwezilwanyana kunye nokutya, ukucoceka kunye nokulawulwa kwezinambuzane.
Ileta yesikhokelo ichaza ngokuthe ngqo ukuba iingcebiso zayo ekugqibeleni ziyingcebiso kwindalo, kwaye uluhlu alufanele luthathwe njengomyalelo wobumbano. Ulawulo lomntu ngamnye lunokongeza okanye luthabathe iindidi zabasebenzi ngokubhekisele kwiimfuno zabo kunye nokubona kwabo.
"I-AHPA iyayixabisa into yokuba abasebenzi bezokutya ngoku bachongwe 'njengeziseko ezibalulekileyo ezingundoqo' kwesi sikhokelo samva esivela kwiSebe lezoKhuseleko lwaseKhaya," uMichael McGuffin, umongameli we-American Herbal Products Association (AHPA), ucatshulwe esitsho kumaphephandaba ukukhulula. "Nangona kunjalo… iinkampani kunye nabasebenzi kufuneka bajonge iingcebiso zikarhulumente nezasekhaya kunye nemiyalelo ekwenziweni kobume bemisebenzi elungele njengeziseko ezibalulekileyo ezingundoqo."